Djibouti Oo Guddi Soo Qiimaysa Xiisaadda Muranka Soomaaliya Iyo Kenya - #1Araweelo News Network
Djibouti Oo Guddi Soo Qiimaysa Xiisaadda Muranka Soomaaliya Iyo Kenya
#Djibouti Oo Guddi Soo Qiimaysa Xiisaadda Muranka @Soomaaliya Iyo #Kenya
Djibouti(ANN)-Xukuumadda Dalka Djibouti, ayaa sheegtay in ay wefdi xaqiiqo raadin ah u dirtay Soomaaliya iyo Kenya si ay usoo xaqiijiyaan, isla markaana usoo qiimeeyaan xuddunta khilaafka iyo xiisadda labada dale e Kenya iyo Soomaaliya.
Sidaana waxa warbaahinta u sheegay Wasiirka arrimaha dibedda dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo sheegay in wafti ka kooban mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Djibouti oo iskugu jira dublomaasiyiin iyo saraakiil sare oo millatari ay maanta gaadheen Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in wafdigu ay soo qiimayn doonaan xaaladda soohdinta Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan degmooyinka xadka labada dal maro ee guddaha Soomaaliya ee Belad -Xaawo iyo Mandheera, deegaamadaa oo ay dawladda Federaalka Soomaaliya sheegtay in ay dawladda Kenya ku samaysay faragelin, isla markaana ay xaalad cakiran ka jirto maalmihii u danbeeyay.
Wasiirka Arrimaha dibbeda Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa sheegay in dawladdiisu ay danaynayso sidii loo xalin lahaa khilaafka labada dale e Kenya iyo Soomaaliya, isla markaana heshiis looga dhex dhalin lahaa labada dhinac ee meesha looga saari lahaa xiisadda sii xumaatay maalmihihii u danbeeyay.
“Djibouti ahaan waxaan aaminsan nahay in Jabuuti ay door ka ciyaarto nabadda iyo xasiloonida gobolka. Arrintana waxay ka dhalatay Shirkii ugu dambeeyay ee Madaxda IGAD oo ka qabsoomay Dalkayaga oo marti gelisay Djibouti, waxayna ka mid ahayd arrimihii lagu soo qaaday, waxaana labada dhinac aqbaleen in Djibouti arrintooda gasho, waana mid aan sii wadayno arrintan ilaa aan xaaladda ka dejino.”Ayuu yidhi.